UNkulunkulu Ulethe Inkazimulo Yakhe EMpumalanga | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
1. Nginikeze abakwa-Israyeli inkazimulo Yami ngase ngiyayisusa lapho,
ngaletha abakwa-Israyeli eMpumalanga, futhi ngaletha bonke abantu eMpumalanga.
UNkulunkulu ubaholele ekukhanyeni
ukuze bazophinda babumbane babe nenhlangano nakho
singabe sisaba khona isidingo sokuthi bakufune ukukhanya.
UNkulunkulu laba abafunayo uzokwenza ukuthi bakubone futhi ukukhanya
nenkazimulo ebenginayo kwa-Israyeli,
bheka uNkulunkulu wehlela emhlabeni ngefu elimhlophe phakathi kwabo abantu,
babone amafu amhlophe abangakwazi ukuwabala kanye namaqoqo ezithelo,
babone uJehova uNkulunkulu wakwa-Israyeli, uNkulunkulu wakwa-Israyeli,
babone iNkosi yamaJuda, uMesiya obekade bemfisa
kanye nokuvela Kwakhe ngokuphelele engake ngashushiswa amakhosi kuyo yonke iminyaka.
2. UNkulunkulu uzokwenza umsebenzi womhlaba wonke jikelele bese ngenze nemisebenzi emikhulu,
ngiveze yonke inkazimulo Yami nayo yonke imisebenzi Yami kubantu ezinsukwini zokugcina.
UNkulunkulu uzoveza ubuso Bakhe obuphelele benkazimulo,
kulabo abebengilindile iminyaka eminingi,
kulabo abebefisa ukuthi ngize ngefu elimhlophe,
kwabakwa-Israyeli abebelokhu befisa ukuthi Ngivele,
nakubo bonke abantu abashushisa uNkulunkulu,
Ukuze bonke bazokwazi ukuthi kade ngayithatha inkazimulo Yakhe
futhi ngayiletha eMpumalanga.
Okulandelayo：Ukuphatha KukaNkulunkulu Okusobala Kulo Lonke Izulu Nomhlaba